DAAWO: Gabar Soomaaliyeed oo caalamka uga yaabsatay xirfaddeeda kubadda kolayga! – Gool FM
DAAWO: Gabar Soomaaliyeed oo caalamka uga yaabsatay xirfaddeeda kubadda kolayga!
Raage February 26, 2017
(Boston) 26 Feb 2017 – Gabar Soomaaliyeed oo 18 jir ah ayaa caalamka kaga yaabsatay xirfaddeeda kubadda kolayga oo ka mid ah ciyaaraha ay caadiyan Soomaalidu ku wanaagsan tahay.
Gabadhan oo deggan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkaasi Maraykanka ayaa caan ka noqotay internet-ka kaddib markii lasoo geliyay muuqaal muujinaya iyadoo inta dhowr qof ag martay si wanaagsan kubadda u geliaysa riboonka.
Gabadhan oo lagu magacaabo Jamaad Fiin ayaa u muuqata mid leh hibo ku aaddan kubadda kolayga iyadoo sidoo kale la arki karo iyadoo tababar ku samaynaysa garoon kale, taasoo ay si wanaagsan oo qiyaasan u dhalinayso kubado badan.
Happy birthday to buzzo @Jamaaad best female hooper 💉💕 pic.twitter.com/h5wiCM8Fbn
— Bradひ (@saidjama5) 23 februari 2017
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii final-ka League Cup ee kooxda Man United ay ka qaaday Southampton
Cristiano Ronaldo oo xalay Rikoodh cusub u dhigay horyaalka La Liga